CV မှာ မှားလွန်းကြတဲ့ အမှားများ - All Things Myanmar Burmese
Previous: « ASEAN GOODWILL AWARD
Next: Billy La Min Aye »
Myanmar Blog » Job Vacancy & Career Day, Knowledge Base, Notes » CV မှာ မှားလွန်းကြတဲ့ အမှားများ
Thank you from Aung La
မတ်လ၁၈ရက်နေ့က ရန်ုကုန်မှာယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အနိုင်ရအောင်ကျွန်တော့်အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိတ်သတ်တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ Marylandမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်များ ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Crazy88နဲ့TLIမှာအမြဲနေထိုင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ ကချင်တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်အတွက်ထောက်ခံအားပေးတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ အားလုံးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကိုအမများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေဒီထက်ပိုပြီးဂုဏ်ယူရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဒီထက်ပိုပြီးလေ့ကျင်ြ့ကိူးစားသွားပြီး မြန်မာပရိတ်သတ်တွေရှေ့အရောက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ ပရိတ်သတ်များအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေ။
Happy Myanmar New Year to you all! ~Myanmar Online Friendship and Dating Community
ကျွန်မနဲ့ သိတဲ့ အစ်မတစ်ယောက် ဧပြီ ၉ရက်နေ့ ညနေ ၆ခွဲနှင့် ၇ ကြားတွင် တော်ဝင်စင်တာမှာ ဈေးဝယ်ရင်း ပိုက်ဆံအိတ်
Myanmar Model from Chiang Mai
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့က လူပြောများနေတဲ့ စားပွဲထိုးဘဝကနေ မော်ဒယ်လ်ဖြစ်လာသူ ရှမ်းပျိုမေ နန်းနွတ် ဟာ ဆန်ပီဆွက် (San Pee Seua)
(ယခုမှ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြမယ့် လူငယ်လေးတွေအတွက် ရေးပါတယ်။ ပညာရှင်များကျော်သွားပါ။ ပညာရှင်များအတွက် ဒါလေးများ… ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မ ဖတ်ရသမျှ CV တွေမှာ အမှားများနေကြတဲ့ ကလေးတွေအတွက် သတိပြုစရာ ဆင်ခြင်စရာလေးတွေ မျှဝေဖို့ ရေးတာပါ)
ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းလွန်လွန်းလို့ ဆရာလုပ်တာလည်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မလို အင်္ဂလိပ်လို မကျွမ်းလွန်းလှသူတောင် ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရတဲ့ အလွဲတွေ ဖြစ်နေတာမို့ အလုပ်ကောင်းရဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ အလုပ်ရှာသူတိုင်း သတိပြုသင့်တဲ့ CV ပေါ်က ရုပ်ဆိုးလွန်းတဲ့ အမှားများပါ။
အလုပ်အင်တာဗျူး ဝင်နိုင်ဖို့က CV ကိုကြည့်ပြီးရွေးတာပါ။
အဲသည် ကနဦးပေးပို့လိုက်တဲ့ CV ဟာ ဖြစ်သလို အမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြစ်နေရင် ကိုယ့်ရဲ့ အစွမ်းအစတွေ ပြသခွင့်ရမယ့် လူတွေ့အင်တာဗျူး ခေါ်ခံရဖို့ အလှမ်းဝေးနေမှာပါ။
CV ရေးနည်းမျိုးစုံရှိမှာပါ။ CV ကဘာ၊ Resume’ က ဘာ ဆိုတာကို ရေးသူများကရေးပြီးသားမို့ ရှာဖတ်ကြပါ။ ထပ်မရေးပါ။
အခု ပြောပြမှာက သတိမမူဘဲ ဖြစ်သလို ရေးနေကြတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ ကြောင့် မိမိ CV ဟာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမခံရတာမျိုးတွေ မဖြစ်ရလေအောင် သတိထားကြဖို့ ပြောပြမှာပါ။ သေးသေးလေးတွေ ဆိုပေမယ့် ဘွဲ့ရမောင်မယ် များ ကိုယ်တိုင် အဲသလိုတွေ ရေးနေတာဟာ
အခြေခံအကျ ဆုံး မျိုးဆက်သစ် ဝန်ထမ်းငယ်တစ်ယောက်မှာ ရှိရမယ့် Attention to detail ဆိုတဲ့ Skills မရှိမှု ကို ဖော်ပြနေရာရောက်နေပါတယ်။ ဒါလေးလွဲတာများ လို့ လုပ်လို့မရပါဘူး။ အဲဒီကနေ မိမိရဲ့ ပညာအရည်အချင်းကိုပါ အထင်အမြင်သေးနိုင်ပါတယ်။
၁။ Career Objective
မိမိရဲ့ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအပေါ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပေါ့။
အဲသည် စကားလုံးကို CAREER လို့ ပေါင်းပါတယ်။ အသံထွက်တော့ ကရီးယား လို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ree ဆိုတဲ့နေရာမှာ Stress ရှိပါတယ်။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်လို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
CV တွေပေါ်မှာ “Carrier” လို့ မှားမှားပေါင်းထားကြတာ ခဏခဏ တွေ့ရပါတယ်။ ကဲရီယာ ဆိုတဲ့ အသံမျိုး ထွက်ပါတယ်။ Stress က ကဲ ဆိုတဲ့ အသံပေါ်မှာရှိပါတယ်။ သယ်ယူလာသူ လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ Career Objective ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို Carrier Objective လို့ပေါင်းတာဟာ အလွန်ကို လွဲချော်နေပါတယ်။ သတိထားပြီး စစ်ကြပါ။
၂။ ရာထူးအမည် Assistant လား Assistance လား
ဒီစကားလုံး ၂ မျိုးလုံးက သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးရင် ဘာမှ ခက်ခဲတာမဟုတ်ပေမယ့် ခွဲသိဖို့လိုပါတယ်။
Assistant လို့ “t” နဲ့ ဆုံးတဲ့ စာလုံးဟာ လက်ထောက် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ (Noun ပါ။)
Assistance လို့ “ce” နဲ့ ဆုံးတဲ့ စာလုံးဟာ အကူအညီ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ရာထူးအမည် မှာ သုံးတိုင်း “t” နဲ့ ဆုံးတဲ့ Assistant ကို သုံးရပါမယ်။
Office Assistant စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့မှာ ထားသုံးရတဲ့ ရာထူးမှာလည်း “t” နဲ့ပဲပေါင်းတဲ့ Assistant ကို Adjective အဖြစ် သုံးပါတယ်။
Assistant Accountant လက်ထောက်စာရင်းကိုင်
Assistant Manager လက်ထောက်မန်နေဂျာ
Assistant Supervisor လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုး စသဖြင့်ပါ။
Assistance Accountant ဆိုတာမျိုးတွေ ပေါင်းတာ မိမိရဲ့ CV ကို အထင်အမြင်သေးစေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ရတဲ့ ဘွဲ့ကို ရေးတဲ့အခါ ဘွဲ့လက်မှတ်ကလေးနဲ့ ပြန်တိုက်စစ်ပါဦး။ ဘွဲ့ယူစဉ်က ပေးတဲ့ စာအုပ်ကလေးထဲလည်း ပြန်စစ်ပါ။ ကိုယ့်ဘွဲ့ကိုတောင် မှန်အောင် မရေးထားတဲ့ CV တွေဟာလည်း အလွန်ကို မဖြစ်သင့်တဲ့ အမှားမျိုး၊ ဘွဲ့ရ ပညာတတ် တစ်ယောက် အဖြစ် မမှားသင့်တဲ့ လက်ခံဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အမှားမျိုး ဖြစ်နေတာမို့ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
Bachelor ဘွဲ့မှာ Honours ဆိုတာကို Honest လို့လည်း ရေးကြပါသေးတယ်။ ဆင်ခြင်ဖွယ်ပါ။ ကိုယ်ယူခဲ့တဲ့ ဘွဲ့ကို တန်ဖိုးထားကြပါ။ မှန်အောင် ရေးကြပါ။
၄။ ရထားတဲ့ Diploma တွေ Certificates တွေ အကြောင်း CV မှာ တန်းစီရေးတဲ့အခါမှာလည်း ရထားတဲ့ Certificate တွေ Diploma လေးတွေကို ထုတ်ကြည့်ပြီး သတ်ပုံမှန်အောင် ရေးပါ။
အမျိုးစုံသော Diploma တွေ Certificate တွေ ကို သတ်ပုံမှားမှား ရေးထားတာဟာ တကယ့်ကို Certified ဖြစ်ကြောင်း Diploma ကို ထိုက်တန်စွာ ရခဲ့ကြောင်း မျက်မှောင်ကုတ် စဉ်းစားစရာဖြစ်ပြီး CV ဘဝမှာတင် ပယ်ခံရနိုင်ခြေ များနေတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ”Supply Chain” ကို “Supply Change” လို့ပေါင်းတာမျိုးကတော့ အတွေ့ရအများဆုံး အမှားတစ်ခုပါ။
Supply Chain ဆိုတာဟာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ပေးရေးကွင်းဆက် ပါ။
Change ဆိုတာကတော့ အပြောင်းအလဲ ပါ ။
၅။ ဘာသာစကားမှာလည်း လာထားပါပဲ။
Language Scale ဆိုတာလည်း တွေ့ဖူးလိုက်ပါတယ်။
CV ဆိုတာလေးဟာ ကိုယ့်ကို လူအကောင်လိုက် လူတွေ့ အင်တာဗျူး ခေါ်တွေ့ချင်စိတ် ပေါက်သွားအောင် ပေးပို့လိုက်တဲ့ Flyer လေး တစ်ခု လိုသဘောထားပါ။ အပြင်မှာ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်တာဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှု မိတ်ဆက်တာဖြစ်စေ Flyer လေးတွေ ဝေတာ ကြုံဖူးကြမှာပေါ့။
Flyer လေးဟာ အရောင်အသွေးစုံလင်၊ ပုံလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ အညွှန်းလေးကောင်းမှ သာ အဲသည် ဆိုင်ကိုသွားတာ၊ အဲသည်ပစ္စည်းကို ဝယ်ဖို့ စေ့ဆော် နိုင်တာ ဖြစ်သလို
အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါလည်း ကိုယ့် CV လေးကို ကြည့်ပြီး CV လေး သားနား သပ်ရပ်နေမှ လူတွေ့ အင်တာဗျူးခေါ်တွေ့ချင်မှာ ဖြစ်တာမို့ သတိလေးထားကြစေလိုတာ…စေတနာပါ။
* နမူနာ ပြောတာပါ။ CV ကို မှင်ရောင်စုံတွေ နဲ့ရေးပါလို့ ပြောတာမဟုတ်။
*Creative ရာထူးတွေမှာတော့ ဆန်းသမျှကို ထွင်ချင်ထွင့်ပေါ့လေ။ ကျန်တာကတော့ ပုံမှန်လေးပဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကောင်းပါတယ်။
၆။ နောက်ဆုံး တစ်ချက် ကတော့ ဓာတ်ပုံပါ။ ဓာတ်ပုံ မလိုရင် မထည့်ပါနဲ့။ ထည့်ချင်ရင်လည်း သပ်ရပ်တဲ့ Passport ပုံဖြစ်စေ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံကို သုံးပါ။
စွေစွေစောင်းစောင်း ရိုက်ထားတဲ့ Selfie တွေ နဲ့ လည်းတွေ့ရသလို
ဓာတ်ပုံကို ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်ထားပြီး အလင်းတွေလည်း ပြန်နေသော၊ အောက်ခံ စားပွဲခုံကိုတောင် ကြည့်ကောင်းအောင် Crop လုပ် သန့်မထားသော ပြန်ရိုက်ဓာတ်ပုံ မျိုး တွေလည်း စိတ်မကောင်းဖွယ် တွေ့ရပါတယ်။
ဖြည့်ရဦးမှာက Email Address ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တော့မယ့် လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ email address ဖြည့်တဲ့အခါ ကိုယ့် email account ဟာ တည်တည်တံ့တံ့ အမည်ဖြစ်ရပါမယ်။ cutegirl1991@gmail.com တို့ lusoema@ တို့ lupyolay@ တို့ ပေါက်ကရတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ ကျောင်းတုန်းက လူငယ်မို့ ပေါက်ကရ ကိုယ် ဖီလင်လာသလို ဖွင့်ခဲ့တဲ့ email account ဆိုရင် အသစ်ယူလိုက်ပါ။ မိမိအမည်တည်တည်တံ့တံ့နဲ့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်လို့။
မှတ်ပါ။ CV ဆိုတာ ကိုယ့်ဂုဏ်ကို ညွှန်းတဲ့ အညွှန်းစာရွက်ကလေး၊ ကိုယ့်အကြောင်းကို လူမတွေ့ရခင် ခေါ်တွေ့ချင်အောင် အင်တာဗျူးလေး ခေါ်ကြည့်လိုက်ချင်အောင် ရှိသမျှ အရည်အချင်း အရည်အသွေးလေးကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေး နဲ့ သပ်ရပ် မှန်ကန်စွာလေး ရေးပြီး လျှောက်ကြပါ။
အဲသည် CV ကလေးကိုမှ ကျကျ နန မသနိုင်ရင် လျှောက်ကို မလျှောက်ပါနဲ့တော့။ (မလျှောက်ဘဲ ထိုင်နေတာနဲ့ ဘာမှ သိပ်မထူးပါဘူးလို့)
လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အလုပ်အတွက်တော့ CV လေးကို သပ်ရပ်သားနား မှန်ကန်စွာ ရေးတင်ကြပါ လို့ မေတ္တာရှေ့ထား ပြောပြပါရစေ နော်….
credit to ဒေါ်မော်​မော်​ထွန်း (Top HR)
Job Vacancy ” Telecom Site Power Supply and construction specialist “